Ime ụlọ ịsa ahụ ika na ụlọ ịwụ ahụ foset mmezi
Home / Foset Guide / Ime ụlọ ịsa ahụ ika na ụlọ ịwụ ahụ foset mmezi
2020 / 10 / 26 nhazi ọkwaFoset Guide 3567 0
Athlọ ịwụ ahụ foset ika
1: GROHE Ime ụlọ ịwụ ahụ
E hiwere otu German GROHE na 1936. Gtù GROHE nwere ihe dịka 8% nke ahịa ụwa ma bụrụkwa onye na-emepụta ụlọ ịsa ahụ na Europe na ụwa. Ọ bụ onye ahịa amaara ama n'ụwa niile maka ngwaahịa na usoro ịdị ọcha yana onye na-ebupụ ụwa niile.
GROHE jiri akara ya dị elu, nkà ọpụrụiche ya na nyocha na mmepe sara mbara. Ọ na-agwakọta nke ọma ọmarịcha ọrụ na nhazi zuru oke, ma na-egosipụta ọmarịcha mma na amara na-enweghị ngwụcha na ime ụlọ ịwụ niile n'akụkụ ụwa.
2: Moen ụlọ ịsa ahụ
Na 1937, Al Moen sụrụ ụzọ ụwa nke na-agwakọta mmiri ọkụ na mmiri oyi. Ọwọrọetop magazine “FORTUNE” ama ewet ọkpọsọn̄ mmọn̄eba ye mbịtmbịt mmọn̄ Moen nte “kiet ke otu mfọnn̄kan n̄kpọ America ke ọyọhọ isua ikie 100.”
Usoro Moen nke ngwaahịa nwere uzo zuru oke ma di nma maka mkpa nke ebe di iche iche. A na-eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe obibi dị elu, ụlọ nkwari akụ dị elu, obodo nta, ụlọ, ụlọ ọrụ azụmahịa na ụlọ ọha na eze dị iche iche. Na ụlọ ọrụ na-akụ ọkpọkọ ọkpọkọ na ndị bi na United States na Canada, ngwaahịa ndị Moen bụ ndị ụmụ nwanyị na ụmụaka maara nke ọma. Moen® bụkwa akara ama ama na North America na ọha na eze nwere ọnụego ịzụta dị elu. Na ụwa, Moen ngwaahịa na-họọrọ site ọrụ n'ụwa nile n'ihi na ha ikenyeneke mbiet technology, elu nkà, na zuru okè mgbe-sales ọrụ, na-enwe a elu aha.
Hansgrohe amalitela igwe mkpanaka mbụ na-ebuli elu ya na aka aka ya, nke akpọrọ "Nne nke World Shower". Ihe karịrị onyinye nha mba 300 emeela Hansgrohe Group ka ọ bụrụ ụlọ ịsa ahụ kacha mkpa ma kee ụwa taa.
Hansgrohe na-etinye aka na imepụta mmiri ozuzo, ọkpọkọ na akụrụngwa ịsa ahụ, ma tinye onwe ya n'ịmepụta ụlọ ịsa ahụ zuru oke ma dị mma maka ndị ahịa.
Ime ụlọ pọmpụ mmezi
1. Biko nweela ma tozuru etozu ọkachamara maka echichi. Mgbe ị na-etinye, ọkpọkọ mmiri kwesịrị ịgbalị ka ọ ghara ịkụ ihe ndị siri ike, ma hapụkwa ciment, gluu, wdg na elu, ka ọ ghara imebi gloss nke mkpuchi elu. Ọ bụrụ na ejiri ọkpọkọ mmiri gị rụọ n'ụlọ ọhụrụ, n'ihi na a na-agbanye netwọkụ mmiri na-enye mmiri, a ga-enwe adịghị ọcha dịka aja n'ime mmiri. Tupu echichi, biko attentionaa ntị iji wepụ irighiri ihe dị na paịpụ, wee hapụ mmiri ruo ogologo oge ruo mgbe àgwà mmiri ahụ doro anya tupu ịwụnye pọmpụ ahụ.
2. Ejila oke ike mee ihe mmebi mgbe ị na-emepe ma jiri ya, jiri nwayọ gbanwee ya. Ọbụna eriri mmiri ọdịnala adịghị mkpa ịgbagọ na nnukwu mbọ.
3. E kwesiri ihichapu elu nke ihe eji eme mmiri mgbe emechara ya. Ejila eriri ọkpọkọ dị ka ihe mkpuchi aka ịkwado ma ọ bụ jiri.
4. Mgbe nrụgide mmiri adịghị ihe na-erughị 0.02mpa, mgbe oge were, ọ bụrụ na achọpụtara mmiri mmiri ka ọ belata, ma ọ bụ ọbụlagodi ọkụ ọkụ na-agbanyụrịrị, belata mmiri oyi na mmiri ọkụ, wee jiri mepee ka i jiri nwayọọ hichaa mmiri mmiri na mmiri mmiri nke ọkpọkọ Ihe ngebichi ahụ, mgbe ịsachasị adịghị ọcha ahụ, jiri nlezianya wụnye ya, ọ ga-agbakekarị dị ka ọ dị na mbụ.
5. A ga-edebe eriri igwe mmiri nke mmiri ịsa ahụ nke pọpụlị ahụ n'ọnọdụ agbatị agbatịla, etinyekwala ya na ọkpọkọ ahụ mgbe anaghị eji ya. N'otu oge ahụ, mgbe ị na-eji ya eme ihe ma ọ bụ na-ejighị ya, kpachara anya ka ị ghara ịmalite akụkụ nwụrụ anwụ na nkwonkwo n'etiti eriri ahụ na ahụ valvụ, ka ị ghara imebi ma ọ bụ mebie eriri ahụ.
Nke gara aga :: Delta foset Nyocha: yingzụ Ntuziaka maka Kitchen, athlọ ịwụ, ịsa ahụ Systems, na ite fillers Osote: Họrọ igwe eji agba mmiri nke nwere ọtụtụ ọrụ ga-agbaso usoro ibi ndụ ugbu a